News @ M-Media - Page 3964 of 4042 -
ပေါင်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် ရရှိရေးအတွက် အကူညီပေးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်ရရှိရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ပေါင်မြို့နယ် မုတ္တမမြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူငယ်များ ဘာသာရေးအဖွဲ့ခွဲ မုတ္တမမြို့ မ .မ.လ အဖွဲ့ခွဲရုံးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသို့[Read More…]
May 20, 2012 — မြန်မာသတင်း
အလိမ္မာ ပြောတယ် ပြောပါတယ် စာဖတ်ပါ စာဖတ်ကြပါလို့ … ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်နဲ့ ဘာဖတ်သလဲတော့မမေးနဲ့ … အင်း … အများတကာ ရေးသမျှစာကိုတွေ့ကရာဖတ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဥာဏ်လေးတော့ချဲ့တွေးဦးမှပေါ့နော့။ ခုတော့ အွန်လိုင်းတက် ဘလော့တကာလှည့် ဖေ့ဘွတ်တကာပတ်လို့ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေလိုက်ကြထှာဆိုတာမြန်း[Read More…]
May 20, 2012 — Our Perspectives, ထွေရာလေးပါး
ကိုယ့်သာသနာကို ကိုယ်တိုင်တကယ်ချစ်ပါသလား ?
ဂျူလိုင်ရဲရင့် အခုတစ်လော Online ပေါ်မှာရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ ဘာသာရေးပုတ်ခတ်မှုတွေ၊ ဖြေရှင်းမှုတွေ တအုံတကျင်းဖြစ်လာတာတွေ့ရကြားရပါတယ်။ ပုတ်ခတ်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သူတွေကို ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော် မေးခွန်း တစ်ခုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမြင်ချင်နေ ကြလို့လားခင်ဗျာ ? Online ပေါ်မှာ လူလုံးမပြဘဲ[Read More…]
May 20, 2012 — Our Perspectives, ဆောင်းပါး
တိုင်းပြည်တစ်ခု ကောင်းစားစေဘို့ရာ- တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တိုင်းသူပြည်သားများ အနေနဲ့ မိမိက ဦးဆောင်ဦးရွက် အဖြစ် သတ်မှတ်မယ့်သူကို ခေတ်ကာလအလိုက် သတ်မှတ်တတ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ခုဆိုတာ လူတစ်မျိုးတည်း၊ ဘာသာတစ်ခုတည်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဂိုဏ်းတစ်ခုတည်း၊ အယူအဆတူ[Read More…]
May 18, 2012 — Our Perspectives, ဆောင်းပါး
Previous 1 … 3,962 3,963 3,964 3,965 3,966 … 4,040 Next